Febraayo | 2019 | WEEJIDOW
Archive for Febraayo, 2019
War deg deg ah Akhriso ka dib DAAWO: Qarax ismidaamin ah oo aad u xoogan oo caawa ka dhacay Muqdisho
Febraayo 28, 2019
WAAJIDPRESS – 28 February 2019:
Waxaa caawa qarax aad u xoogan oo ismiidaamin ah uu ka dhacay Laamiga Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho gaar ahaan goobo ay ku yaalaan Hoteelo iyo xarumo kale oo ganacsi.
Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexeeysa Hotel Maka Al-Mukarama iyo Maqaayad lagu magacaabo Hilaac UK oo ku taalla Wadada Maka Al Mukarama,isla markaana waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa waxa uu ka dhacay darbiga ay wadaagaan labada Hotel ee Maka Al Mukarama & Hotelka Hilaac Uk oo isku dhagan, waxaana jira khasaare badan oo shacabka soo gaaray.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya dabley hubaysan inay saaran yihiin dhisme dabaq ah oo ku dhagan Hotelka Hilaac Uk, halkaasina ay ka soo tuurayaan Bambada nooca gacanta laga tuuro.
Dab ayaa ka kacay goobta qaraxa uu ka dhacay ee nawaaxiga Hotelka Maka al Mukarama, iyadoo dabka uu ku sii faafayo goobo ganacsi.
Dabka xoogiisa ayaa hadda wuxuu ka socdaa ka soo horjeedka Hotelka Maka Al Mukarama goobaha ganacsiga ee ka soo horjeeda.
Rag Hubeysan, oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa hadda ku jira, islamarkaana toos ugu dhex dagaalamaya gudaha Hotel Maka Al Mukarama, sida ay sheegayaan warar nasoo gaaray.
Qaraxyo bambooyinka gacanta laga tuuro ah iyo rasaas xooggan ayaa laga dhex maqlayaa gudaha Hoteelka Maka Al-Mukarama, Rasaas xoogan ayaa dhaceeysa gudaha hoteelka.
Waxaa goordhaw qarax labaad uu ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Laamiga Maka Al Mukarama, waxaana qaraxan uu yahay mid wax xoogaa ka yaraa kii caawa fiidkii ka dhacay Hotelka Maka Al Mukarama.
Weerarka oo ka dhashay gaari walxaha qarxa lagu soo xiray ayaa la sheegay in uu dhacay inta u dhaxeysa isgoyska KM 4 iyo Hotel-ka Naasa Hablood 1.
Labada Qarax ee goordhaw dhacay ayaa wali si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha ay dhaliyeen balse la soo sheegayo khasaaro faro badan.
Kooxda Al-Shabaab ayaa war kasoo saartay qaraxyo iyo weerar ay maleeshiyadeeda la beegsadeen hoteello iyo goobo ku yaalla wada Maka Al-Mukarama.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in kooxda weerarka qaadday oo aad u hubeysnaa ay beegsadeen Hotelka Maka Al-Mukarama oo ka mid ah Hoteellada ugu caansan ee magaalada Muqdisho.
Al-Shabaab waxay sheegtay in hoteelka ay degan yihiin saraakiil ka tirsan dowladda federaalka.
Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaal-yahanadeeda ay weerarkan billaabeen is-miidaamin baabuur lagu dhuftay albaabka hore ee Hotelka, kadibna ay xigtay weerar toos ah oo dagaalyahanno aad u hubeysan ay ku qaadeen Hotelka.
khasaaro faro badan ayuu dhaliyey labadii qarax ee caawa Muqdisho ka dhacay – DAAWO:
DAAWO: LAFTAGAREEN OO XALAY CASHO BAYDHABA UGU SUUBIYEY GOLAHA WASIIRADA CUSUB EE DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED
DAAWO: XILDHIBAANADA BAARLAMAANKA FEDERAALKA EE LAGA SOO DOORTEY PUNTLAND OO MAANTA MUQDISHO QADO UGU SAMEEYEY BURHAAN
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo Caawa gaaray magaalada Hargeysa
WAAJIDPRESS – 27 February 2019:
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafe Muxumed Cumar (Cagjar) iyo wafdi uu hoggaaminayay,ayaa Caawa socdaal dhanka dhulka ah ku gaaray magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland.
Ujeedka socdaalka wafdiga waxaa lagu sheegay iney ka qeyb galayaan mashruuc beri la filayo in lagu dhagax dhigo wadada isku xirta magaalooyinka Berbera iyo Wajaale, kaasoo loogu magac daray (Berbera Corridor).
Wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa sheegay in dhagax dhiga wadadaas kulan labo geesood yeelan doonaan Mustafa Cagjar iyo Madaxweyne Muuse Biixi ai, iyadoo lagu soo wareejin doono magaalooyinka kale ee Somaliland.
War deg deg ah DAAWO: KHILAAF SOO KALA DHEXGALEY FARMAAJO IYO RAISUL WASAARE KHEYRE IYO WASIIRO LA SAFTEY KHEYRE
Febraayo 27, 2019
War hadda soo dhacay: Dilal kala duwan oo ka kala dhacay Boosaaso iyo Galkacayo ee PUNTLAND
Kooxo hubaysan ayaa siyaabo kala duwan waxa ay saacadihii la soo dhaafay dilal qorsheysan uga kala geysteen Magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo ee Dowlad goboleedka Puntland.
Dilka koowaad ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha Magaalada Boosaaso gaar ahaan goob Gawaarida laga raaco oo lagu magacaabo Gaaca, waxaana dad ku sugan Boosaaso ay sheegeen in la dilay Askari ka tirsanaa Ciidamada Puntland.
Nin ku hubeysnaa Bistoolad ayaa la sheegay in askariga oo lagu magacaabi jiray Shucayb Cismaan Caluula uu dhawr xabadood madaxa kaga dhuftay xilli ay wada saarnaayeen Gaari rakaab ah, kadibna uu halkaasi ka baxsaday.
Dilka labaad ayaa waxa uu ka dhacay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo kadib markii Nin hubeysan uu Gurigiisa hortiisa ku toogtay xalay Wiil 12 jir ah oo lagu magacaabi jiray Xaaji Cabdirashiid Faarax, isaga oo goobta ka baxsaday.
Weli lama oga sababta loo dilay iyo cida ka dambeysa dilkiisa, hayeeshee waxa uu ku soo aadayaa xilli weli Magaalada Gaalkacyo laga hadal haayo kufsigii iyo dilkii loo geystay Caaisho ilyaas Aadan.
DAAWO: DOWLAD GOBOLEEDKA KOONFUR GALBEED OO CAMBAAREEYEY FALKII LAGU LAAYEY DAD SHACAB AH DEEGAANKA CEELASHA BIYAHA EE AFGOOYE SHABEELAHA HOOSE
WAAJIDPRESS – 26 February 2019:
Bam gacmeed lagu weeraray goob Internet-ka laga isticmaalo oo dhalinyaro ku sugnaayeen degmada Boondheere ee magaalada Muqdisho
Febraayo 26, 2019
Wararka laga helayo degmada Boondheere ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray goob Internet ah oo ay dhalinyaro ku sugnaayeen.
Sida ay sheegayaan wararka labo ruux ayaa ku geeriyootay bam gacmeedka, halka labo kale ku dhaawacantay.
Wararka ayaa sheegaya in goobta qaraxa bam lagu weeraray ay ka aheyd goob aad u camiran oo dhalinyarada ku caweeyaan.
Goobta la qarxiyay waxey ku taalaa inta u dhexeysa Isgoyska Maanabooliyo iyo Masjidka Caanka ah ee Xaaji Yabaroow, waxaana ka agdhaw goobta Kontorool ay leeyihiin Ciidamaada ammaanka.
Ammaanka Xaafadaha magaalada Muqdisho ayaa ah mid sii xumaanaya dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay, iyadoo ay ka dhacayeen dilal.
DAAWO: DOWLADA NORWAY OO MAANTA FURTEY WADOOYIN AY KA DHEXDHISTEY MAGAALADA BAYDHABA
DAAWO OO KA FAAIDEYSO: MUXAADARO KU SAABSAN AKHLAAQDA WANAAGSAN
WAAJIDPRESS – 25 February 2019:
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Febraayo, 2019.